ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆန်ဖရန်စစ္စကို - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆန်ဖရန်စစ္စကို
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆန်ဖရန်စစ္စကို
ရာထူး: ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆန်ဖရန်စစ္စကို
ကုမ္ပဏီ: MLB အဆင့်မြင့်မီဒီယာ
အောက်ပါလင့်ခ် သုံး. အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ်အနေအထားလျှောက်ထားပါ - mlb.theresumator.com/apply/wt1Ibp/Broadcast-Engineers-New-York-City-And-San-Francisco-Based.html .
MLB ရဲ့ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများလာမည့်မျိုးဆက်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အပါအဝင်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုထိန်းသိမ်းရန် မာလ်တီမီဒီယာ နည်းပညာ။ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများကသူတို့ signal ကိုဖြန့်ဝေနေသည်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ transmission ကိုများအတွက်အာရုံကြောစင်တာနှင့် Starting Point သို့ဖြစ်သောအနုပညာဂီယာစစ်ဆင်ရေးစင်တာများ၏ MLB ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုရုံးထဲကအခြေစိုက်မည်အလုပ်။ shift အဆအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါမည်အများစုကိစ္စများတွင် 40 နာရီတစ်ပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စစ်ဆင်ရေးစီမံလုပ်ကိုင်မှုကို, လမ်းကြောင်းများနှင့်မျိုးစုံ A / V ကိုစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံနှင့်ထံမှ feeds များပါဝင်သည်။
ပြောင်းကုန်ပြီနည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်ခုအဆုံးရေးသားအများအပြား Excel စာရွက်များ, နှင့်အခြားလိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို update A / V ကိုလမ်းကြောင်းတစ်စီးရီးထ setting ပါဝင်သောတစ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, Completing ။
လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့်နည်းပညာအမှား rectifying ။
အသစ်သောနည်းစနစ်များနှင့် Workflows စုံစမ်းစစ်ဆေး။
PC နဲ့ Mac အတွက်စနစ်များနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို။ အခြေခံပညာကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကျွမ်းကျင်မှု။
On-ဝေဟင် switching, လမ်းကြောင်း, မာစတာထိန်းချုပ်မှု, အသံအင်ဂျင်နီယာ, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်အင်တာနက်ကို streaming များအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အတွေ့အကြုံများကို။
SD က၏အလုပ်လုပ်ကိုင်အသိပညာ /HD TX / RX ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စနစ်များ။
ထိုကဲ့သို့သောဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုကုန်တင်ကား, ဒေတာစင်တာများ, ဒါမှမဟုတ်အသံသွင်းစတူဒီယိုအဖြစ်အလားတူအစာရှောင်ခြင်းပွေးညီ enviroments မှာအတှေ့အကွုံ။
အတူအတွေ့အကြုံကို Evertz, မြက်ချိုင့်, ရော့စ်နှင့် router များ, Switcher နှင့် terminal ကိုဂီယာအခြားဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုနှင့် streaming များကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ၏အသိပညာ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-08-31
ယခင်: Presteigne အသံလွှင့်အရစ်ကျ 50th Jalsa ဗြိတိန်ထောက်ခံပါသည်
နောက်တစ်ခု: MultiDyne IBC2016 မှာအမြင့်-Density, Configuration Fiber ပို့ဆောင်ရေး Accentuates